Sehatry ny fizahan-tany : Fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara -
AccueilSongandinaSehatry ny fizahan-tany : Fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara
Sehatry ny fizahan-tany : Fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara
16/04/2018 admintriatra Songandina 0
Vakoka iray ao amin’ ny tanànan’i Mahajanga ny « Baobab Tree Hotel and Spa » izay tosika iray mampandeha ny lafin’ny fizahantany, saingy noho ny zava-nisy dia niato nandritra ny taona telo ity reharehan’ny faritra Boeny ity. Noho ny ezaka natao amin’ny fanamboarana sy fanatsarana ny hotely
« La Piscine » anefa izay manana kintana efatra, dia afaka nilahatra sy manana ny maha izy azy ity trano fandraisam-bahiny ity, ary anatin’ izany ny fandraisana fivoriana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Nanatitra ny fanokanana ny hotely « Baobab Tree Hotel and Spa » ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny sabotsy faha-14 aprily 2018. “Manoloana ny zavatra rehetra misy eo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena izay ahitana fikorontanana maro samihafa, dia mbola mijanona firenena tony tsy hahitana ady i Madagasikara. Hiaraha-mahalala ihany koa fa mbola betsaka ny asa mila tanterahina, ary maro ihany koa ny fotodrafitrasa izay tokony hatao, saingy tsara ny manamarika fa efa manana izay rehetra ilaina isika” hoy ny tompon’ ny fotodrafitrasa Baobab Tree Hotel and Spa, Semir Soundardjee.
Manoloana ny fahavitan’izao fotodrafitrasa izao kosa dia nanambara ny Filoham-pirenena fa fotoana lehibe izao zava-mitranga izao ho an’ny tanànan’i Mahajanga, satria dia samy tokony ho faly sy ravo ny rehetra manoloana izao fotodrafitrasa goavana sy sarobidy izao. Nomarihan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa ny lafin’ny fizahan-tany dia anisan’ny motera fahafito amin’ny fandrosoan’ny firenena anatin’ny fisandratana, izay vina amin’ny fanovana ny tontolo ekonomika sy fampandrosoana an’ i Madagasikara hatramin’ny 2030. “ Eo amin’ ny sehatry ny fizahan-tany izay, dia tanjona ny ahatonga an’i Madagasikara ho voalohany eo amin’ ny sehatra eran-tany. Eritreretina hatrany amin’ ny 500 000 ireo asa miforona eo amin’ ny sehatry ny fizahan-tany amin’izany, noho izany dia ezahina ny ahatonga ny harinkarena faobe ho 10% , raha toa ka 5 hatramin’ny enina isan-jato izy amin’ izao fotoana izao. Ny fahafahana mamita sy mahatratra io vina io dia hitondra hery lehibe ho an’ ny fampandrosoana eo amin’ ny sehatra maro , ary indrindra ihany koa ny sehatry ny fizahan-tany amin’ ny lafiny maro na ny ZIT. Mahajanga rahateo dia anisan’ny havokavoky ny lafiny ara-toekarenan’ ny faritra Avaratra, amin’ny alalan’ ny fizahan-tany izay voalohany indrindra ankoatra ny fambolena, jono, ny hazandrano maro sy ny lafin’ny solika ihany koa” hoy hatrany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Nanazava moa ny Filoham-pirenena, ny vinan’ny fisandratana amin’ny fampidiram-bola eo amin’izay sehatry ny fizahan-tany izay, izay miainga amin’ ny kajy eo amin’izay fahatongavan’ny mpizaha tany. Ny vokatry ny fahatongavan’ ny mpizaha tany maro ampitomboiana amin’ ny andro hijanonan’izy ireo eto an-toerana, sy ny vola izay nolanian’izy ireo isan-andro “ny tokony hipetraka eto Madagasikara dia fizahan-tany tompon’andraikitra sy maharitra, miaraka amin’ireo toerana maro sy ny fialambolin’ny mpizahantany ahafahana mampiditra vola betsaka. Raha ny vola miditra sy lanin’ ireo mpizahantany anatin’ ny taona iray dia mahatratra eo amin’ ny 750 tapitrisa Dolara. Amin’ ny taona 2030, noho ny fametrahana ny vinan’ ny fisandratana , dia tanjona ny hampidirana 3 hatramin’ ny 4 Dolara, ary izay dia hiankina betsaka amin’ny fahatongavan’ny mpizaha tany, ary eo ihany koa ny fandaniana izay hotanterahin’ izy ireo amin’ny alalan’ny fahatsaran’ny tolotra omena azy ireo” hoy hatrany ny fanazavana izay nentin’ ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina
Teny ampamaranana dia nisarika ny sain’ireo mpandraharaha sy ny mpiara-miombon’antoka amin’ny sehatry ny fizahan-tany ity, fa ny fanjakana malagasy dia miaraka amin’ izy ireo amin’ny fanatsarana ny fepetra ilaina amin’ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany. “Ny fametrahana fitoniana sy ny filaminana eo amin’ ny sehatra sosialy sy ny politika no anisan’ny notadiavina sy napetraka amin’ny ahafahana mametraka fampandrosoana: saingy tsy mora hatrany anefa izany, satria raha mieritreritra sy mivaky loha amin’ny fampandrosoana isika, ny hafa kosa dia mitady handrombaka fahefana tsy handalo amin’ny fifidianana. Mandritra ny fotoana izay hametrahana ny filaminana kosa dia ny hafa indray tsy misy atao afa-tsy ny asa fanakorontanana, izay tsy mijery velively ny tombontsoam-bahoaka sy ny firenena. Amin’ ny maha filoham-pirenena ahy, dia andraikitro ny manara-maso izay fisehon-javatra rehetra izay, ary tsy hisy tomika izany andraikitra nankinina tamiko izany. Ilain’ny firenena ny fitoniana mba ahafahana manao ny asa fampandrosoana eo amin’ ny sehatra ekonomika sy sosialy. Ny ady izay tanterahintsika amin’ ny fampandrosoana dia mitady ho very anjavony, noho ny ady sy korontana politika tsy mety vita nefa tsy mampandroso ary lasa sakana. Ny ady iraisana noho izany dia ny ady amin’ny fandranitana, ary hirosoana ny fiaraha-mientana sy ny firaisankina amin’ ny fampandrosoana ny firenena” hoy hatrany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina namarana ny lahateniny.